Apple patents titanium mameseji emangwana MacBooks | Ndinobva mac
Apple ichangobva kupa patent maitiro akasarudzika ekurapa pamusoro pezvinhu zve titanium, nekudaro kuwana kwakakosha kupera. Saka haufanire kunge uine ruzivo rwakanyanya kuti uzive izvo Cupertino zviri.
Handizoshamiswa kana ramangwana MacBook Pro inosanganisira titanium casing. Kana inotevera MacBook Air ikakwira iyo M1 processor, zvichave zvakakodzera kupa iyo MacBook Pro ine kunyange iri nani processor, kana zvimwe, "Premium" tsananguro senge titanium casing, kuitira kururamisa mutsauko wemutengo….
Vhiki rino Apple yakapihwa nyowani patent uko kutsva kweindasitiri maitiro ezvinhu zvakagadzirwa zve titanium zvinotsanangurwa izvo zvinopa zvataurwa zvidimbu chakakosha kupera.
Iyi patent inonzi "Zvikamu zveTitanium Zvine Polished Surface Texture" uye yakapihwa neUS Patent uye Trademark Hofisi. Inotsanangura mashandisiro emidziyo dzakasiyana siyana kutora titanium dzimba ne kuumbwa yakasarudzika.
A "inobata-inoshamwaridzika" dhizaini yetitanium
Nemabatirwo anorondedzerwa patent, pamusoro pechikamu che titanium hakusi kushata.
Mune gwaro, Apple inotsanangura iyo aluminium anodized, inoshandiswa mune yazvino MacBooks uye iPads, haina kuomarara kana kusimba senge titanium. Nekudaro, kuomarara kwe titanium kunoita kuti zvive "zvakaoma kwazvo kupolisha", zvinoreva kuti inogona kuve "isingafadzi. Iyo patent inotsvaga kuratidza mhinduro kuchinetso ichi nekutsanangura kukwesha, kuchenesa uye kuita kwemakemikari kupa chidimbu chetitanium chitarisiko chinokwezva.
Iyo patent inoratidza zvakare kuti izvi zvakavezwa titanium zvidimbu zvingave dzimba dze MacBooks, iPads, iPhones uye Apple Watches. Apple yakashandisa titanium makesi kune chiverengero chidiki chezvigadzirwa, senge PowerBook G4 yaivepo kubva muna 2001 kusvika 2003. Apple yekutanga yekukwikwidza mumatitanium makesi yakadzvanywa nenyaya dzakadai sekupwanya kwakakonzera kutyoka, pamwe nependi inovhenekera nyore .
Nhasi, chigadzirwa cheApple chete chinoshandisa titanium kesi ndiyo Shanduro yeApple Watch, iyo inoita kunge iri padyo nepedyo yekupedzisira inotsanangurwa neiyo patent pane iyo titanium PowerBook G4. Kana vakapedzisira vaiisa mukuita, titanium MacBook inogona kunge yakareruka uye yakaoma kupfuura yazvino aruminiyamu.
Chinhu chakashata ndechekuti zvingave zvakare más caro. Kana tikatarisa musiyano wemutengo pakati peyakajairika aluminium Apple Watch Series 6 uye Apple Watch Series 6 Edition, iine kadiki titanium iyo inodiwa kuita nyaya yeApple Watch, ini handitombodi kufunga izvo MacBook ingadhura Yakazara Titanium 16 Inch Pro….
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Pro » Apple patents titanium mameseji emangwana MacBooks
Podcast 12 × 16: iOS 14.4 uye iPhone 13